gvSIG, ukunqoba izikhala ezintsha ... kuyimfuneko! Ingxabano? - Geofumadas
GvSIG, Ukulwa neZithuba ezintsha ... Kubalulekile! Ingxabano?
NgoJulayi, 2011 GvSIG, Ukuzonwabisa / ukuphefumlelwa, Izopolitiko kunye nentando yeninzi
Leli igama elibizelwe INgqungquthela ye-GvSIG yamazwe angama-7 kufuneka kwenziwe ekupheleni kukaNovemba wonyaka we-2011.
Ugxininiso lwalo nyaka luya kunika ithuba lokuthetha ngokusingqongileyo kwiindawo ezizimeleyo ze-software ze-geospatial transnationals; kodwa indlela yayo ayinakukhunjulwa, ukuba kulindeleke ukuba i-gvSIG ikwazi ukuphula iingxaki ezikhoyo kumazwe angenayo imigaqo-nkqubo ecacileyo ekusebenziseni isofthiwe ekhululekile kwaye apho ihlala ikhunjulwa ukungabi nolwazi okanye izinto ezithile.
Kule nto, kulindelwe ukuba kuya kubakho iintetho kunye neetafile zengxoxo kwiinkqubo eziphakathi kwexesha elide ukuguqula iimbali ezinjengale:
Iprogram ye-software engenawo i-quality ayikho imgangatho
- Akunakho iinkampani ezisekhompyutheni yamahhala
Into ebaluleke kakhulu ukuba iSiseko seGvSIG senzayo sidibanisa i-academy - yoluntu-abucala ukuzinza kwayo. Akukho nto eyenziwa ngamanye amanyathelo ovulekileyo ayenzileyo, ngokwahlukileyo okuphawulwe kwimigudu yemibhalo echanekileyo kunye nokuhlanganiswa kwezivumelwano kunye neendlela ezingenakunceda ukuba kube ngoku kuvelise iziphumo ezinomdla kwiYurophu naseMelika.
Ngokukodwa kube lula kum ukuba ndiqinisekise umsebenzisi ukuba asebenzise ithuluzi elibiza amawaka eedola ngaphezu kwesisombululo samahhala. Akunjalo ngenxa yokuba amandla akhe awakwazi ukubonakaliswa ngokusemthethweni, kodwa ngenxa yeempembelelo zolawulo zokuthenga isofthiwe engenaxabiso lokubiza kunye nokuyifakela isisombululo sesevisi kunzima ngabagqwebi beemvelaphi ezithile.
Ingxaki ingaba neengxaki ngokubhekiselele kwizikhundla, kodwa kwakhona i-internationalization kufuneka iholele kwisimo sengqondo sokubamba ngokunyanisekileyo into engayi kunikwa ngaphandle komzabalazo. Akukho nto engcono kunekhompyutheni elungileyo kwaye kuthiwa ... kukho ukuba ufuna ukuyisebenzisa.
Akunzima xa sicinga ukuhlaziywa okunokulindelwa ngokutshatyalaliswa komfanekiso njengoko eli lixesha liyabonwa Hacker, esicatshulwa ngokugqithisileyo nangobungqina bobugorha nangona okokuqala kwakungekho. Kule meko Kungumngcipheko lunxulunyaniswe nemiba yembono ngasekhohlo, ukuba nangona imigaqo isiseko eyenziwa kakhulu of Latin anxulunyaniswa amasiko populist kunye neengxelo ningazi neenkokeli zawo ukuba imke kakhulu mbono.
Kuyinselele enkulu ukuba i-gvSIG inenjongo yokujongisa le meko, ukudideka phakathi kwezinto ezivulekileyo kunye nezixhobo ezizimeleyo zeSofthiwe zineengxaki zokuqonda kakuhle nakwezinye zethu, masibone ezinye iindlela:
Ulwazi kufuneka ludemokhrasi: Le flegi ndiye ndaziphakamisa, i-Geofumadas inxalenye yaloo mgaqo kwaye ndisoloko ndigxininisa kubachwepheli bam abadlulileyo kwiminyaka ye-50 ukuba bangazigcini ulwazi lwabo baze babuyisele kwizizukulwana ezintsha ukuba silindele inkqubela phambili.
Njengoko uprofesa kwiYunivesithi enesimo esingenako ukuthumela njengaye ulwazi oluye ludala umzamo omkhulu. Ukucinga okubangela ukungonakaliswa kwamaziko amaninzi okanye imisebenzi kwaye kubonakala ngathi iingcambu zokuzithemba eziphantsi ezibonakaliswa ngokuzikhukhumeza nokungazikwazi ukuthengisa iinkonzo ezivela kulwazi olufunyenweyo. Ukuba umntu ucinga ukuba bayabulumko kwaye bazilumko, makabonakalise ngokuguqula ubuncwane, nokuba batshintshe umveliso wabo wengqondo ibe yimveliso ethengiswayo okanye ukuthengisa inkonzo ...
Iimbono zangaphambilini ziya kubonakala zingenangqiqo, kodwa ngumgaqo ofanayo odlalwa ngamanye amaxesha ekukhutshweni okubangelwa kwicandelo labucala kumaphulo kunye nokuvuleka koluntu.
... kunye nexesha, ngamanye amaxesha kamva ukuba umntu ogqithisa ulwazi lwakhe ukhula, ufunda, uhlaziywa kunye nempembelelo ngaphezu komntu othabatha izihloko zawo kwingcwaba.
Ukunika iingcebiso akuthethi ukuba yimali, kwaye akuthethi ukuba kufuneka sinike iinkonzo zethu mahhala. Xa sithetha ngokwentando yesininzi ulwazi sibhekisela umgaqo ubuchule bokuyila nawoshicilelo kunye nombono nenentsebenziswano ukuba ndibe neminqweno eliphezulu (ezinkulu kuno ubuchule bam), ndithi sikwazi ukudala uluntu abantu ngobambiswano kuluvo kwelinye inqanaba , ekuqondeni ukuba kuya kuhlala kusetyenziswa kuluntu, njengokuba ikhulelwe.
Kule nto ndiya kuba ke, inkunzi enkulu yolwazi engabonakaliyo, kodwa ibhalwe phantsi kwaye ibonakaliswe ukusebenza, ngobunini basemphakathini, okokuba, uluntu lonke kunye nesitalato okanye indawo yokupaka. Ukuba ukuphumeza okanye ukwenza ukulungelelanisa okukhethekileyo kubangela imali kulabo bachaphazelekayo, ngoko sibiza le software ekhululekile: ulwazi olwakhiwe aluvumelekanga, kodwa luhlawulwa ukuba luphumeze. Ukuyikhulula kuluntu phantsi kwemigaqo yokusetyenziswa kwamahhala kukudala ukuba ikhule kwaye ifumane iimpawu ukuba iqela elincinci leengcali alizange liphumelele.
Le yindlela udibaniso loluntu, ngolwazi loluntu kunye nabasebenzisi ababuyela kumaphuhlisi umgangatho ophuculweyo kwi-core core. Kukho ukuhlala kushishino, kodwa phantsi kolwazi lwentando yeninzi ... Yiyo ifilosofi eyahlula ikhululekile kwi-free, kwaye ayikulindeli ukuba igalelwe, ngakumbi emva kweseshoni kunye nabantu baseRedHat ukuxoxa ngesibonelelo sezoqoqosho.
Iprojekthi iyinkunzi engenakulinganiswa: Ndityalomle iiyure ze-10,000 zexesha lam kwaye ndibolekisa abantu abathathu ukuphuhlisa ithuluzi lekhompyutha. Akukho nto inokuthintela ukuba ndiyiqwalasele loo mveliso njengendawo yam kwaye ndirekhoda kakuhle ukuze utyalo-mali lwam abuyele ngokuthengisa isofthiwe kumntu okanye kwiinkampani.
Ngaloo ndlela, ulwazi olufunyenweyo xa kuphuhliswa kwesi sicelo luvelise inkunzi apho abanye abantu kunye namaziko aza kusebenza ngokusebenza kakuhle. Kwaye akukho sizathu sokuba ndiqwalasele ukuba ngenxa yokuba ndiyazi, ndinika uluntu iikhowudi kwaye ndabhema ngenxa yokuba ulwazi kufuneka ludemokhrasi. Iprojekti ayilungile kakuhle, yingakho kulula ukuyidonsa, kodwa yinkalo yolwazi oluhlanganisiweyo ukubonelela isisombululo.
Ngoko ke umgaqo-software obuphuma, ukuba emva ukufika PC saphela ukuba abe ixabiso nokuthengiswa hardware kunye mvume iikhonsepthi (elijongeka ngakumbi njenge mvume ngaphandle imveliso) zadalwa wazalwa. Iphethwe ngabathengi-mali ekuphuhliseni kwayo, kwaye oko kuqondwa kunika ixabiso elongezelelweyo kulabo abalisebenzisayo: lifanelekile ulwazi oluhlanganisiweyo, kwongezelela ukuba inokuhlawulwa ukuyifezekisa.
Ikhompyutheni yokuziphendukela kwemvelo iya kuqhubeka nokufikelela kwinkcazo yomthetho ye-capital engenakwenzeka eyenza i-30 iminyaka ingekho, ukunika imizekelo, ukufakwa kwekhasi lewebhu, abasebenzisi ababhalisiweyo beforamu. Iingxaki ezifana nomda phakathi kwe-100 imigca yekhowudi kwisofthiwe esele ikhona iilayibrari ezifana nemigca ye-5 ye-algorithm engabonwanga mntu.
Kulapha, zeziphi iintlobo zoshishino ezimbini kunye namaqhinga ahlukeneyo, zombini ukukhangela ukulungisa ingxaki efanayo. Eyokuqala inengozi yokulahlekelwa ukuzinzileyo, okwesibini nomngcipheko wokuthi inkampani inquma ukuthengisa kwenye into enokuthi ingaqhubeki ukuphuhliswa kwayo.
Umba ke ngoko, kwimeko eyenzekayo URichard Stallman kwi-1983, xa wayeziva akwazi ukuphucula iziphene ezazisenkqubo. Le nkampani ayizange imvumele ukuba ayichukumise ikhowudi, nangona wayebaxelele ukuba uya kuyenza mahhala kunye neenzuzo eza kuba yinkampani enye.
Emva koko, kuya kuba yinto ephikisanayo, ukuba xa ndithenga ipakethe yolwazi kwaye ndiyakwazi ukulungelelanisa ngokusekelwe kwimiba yam ... ke andinayo loo phakethi, kungekho ngendlela ekhululekile. Akunjalo njengoko ndiza kufaka iifoto zam kwiToyota imoto ukuze ibukeke njengehlengethwa, ngenxa yokuba iToyota ithi imifanekiso yayo yonakaliswe ngumfazi wam. Ukuba ukuba iToyota ibeke isigatya sokuba ukuba ndenza oko ke ndiyakwazi ukuhlawulwa, ngoko ndiya kukholelwa ukuba andinayo into endiyithenge yona.
Kodwa ke, yonke into iyaxazululwa ukuba wonke umntu enze ishishini lakhe. Ukuba umntu ufuna ukuthenga isofthiwe esisetyenzisiweyo, yithenge, kwaye yamkele iimeko. Ukuba ufuna isofthiwe ekhululekile, hlawula ukuphunyezwa kwaye uthathe uxanduva lwakho.
Nangona kunjalo, ingxaki ingaphaya, kwinqanaba nje kuphela kwezoqoqosho kodwa kwezopolitiko nakwifilosofi. Kwimimiselo yokuba iinkampani ezinkulu zokuvelisa iifayili zenza, ngokubambisana ngamaxesha athile kunye nabakhiqizi okanye abasabalawuli bezixhobo ukufumana isofthiwe ekhululekile ngaphandle kwintsimi, ukuvala izithuba zokusebenzisana kokusebenzisana kunye namazwe amaninzi ekunyanzeleni kwezopolitiko.
Kule nkalo, simele siqaphele, kuba iinkalo zefilosofi ziye zibangelwa yimfazwe enkulu. Eminye imigaqo echazwe nguRichard Stallman kwintlangano ye-GNU iyafana kakhulu nomzabalazo onxamnye nomninimandla-mthetho ogqithiseleyo.
"Ukuba iinkampani zinempembelelo ekhethekileyo kwezopolitiko kuthetha ukuba idemokhrasi iyagula, injongo yentando yesininzi kukuqinisekisa ukuba isityebi asinalo impembelelo ngokumalunga nobutyebi babo, kwaye ukuba banempembelelo engaphezu kwakho okanye mna, oko kuthetha ukuba idemokhrasi ayiphumeleli, imithetho efumaneka ngale ndlela ayinalo igunya lokuziphatha, kodwa ikwazi ukwenza okubi. "
Zivumelanise ngokupheleleyo kwiimeko zoqoqosho, zomthetho kunye nezopolitiko zelizwe ukuba ufuna ukuzisa kwizinga leempumelelo zentlalo kunye nokuguqulwa kophuhliso. Kodwa ukuthatha le ngxaki kudinga ukuba kubekho amazwe afanelekileyo, akukumangalisi ukuba kumazwe amaninzi eMzantsi Melika kukho imigaqo-nkqubo yelizwe ekusetyenzisweni kweprogram ekhululekile kumaziko karhulumente. Leli lungelo lokulawula, kunye neengcinezelo zelizwe ezi zinto kufuneka zibhekwe njengesifo. Kodwa kufuneka sinyamekele ukuba ukunyuswa koMthombo ovulekileyo kuxhoba lokudemonika kwemigangatho ekhohlo.
Yintoni eyenzekayo kukuba le ngxabano kwiminyaka emibini edlulileyo e-Central America yashiya i-4 kusasa ekuseni ukuya kumongameli, kunye neepjamas zakhe zamabhanki kwisikhululo se-Costa Rica. Kwakhona ngenxa yokugxininiswa kweVenezuela, inkampani yabucala ihlala i-viacrucis, ekufuneni ubulungisa, ilahlekelwe ukukhuphisana kwayo. Kwaye ke i-populism yabamongameli abathile be-leftist yenza ukuba babhengeze inzondo okanye bayeke imizamo kunye neziphumo ezinobungozi kunokuba kunene kunene.
Kwaye ekugqibeleni, bona zemveli സ്വീകര്ത്താവ് xa nihlangene ndawonye iindevu epheleleyo bugs yentsikelelo iikhompyutha kwiholo, kuba abantu kodwa kakhulu ziphazamisa umgudu ukuba ayiyi kuba nkulu clichés ukuba une kuhlútha yozinzo aqinisekisiweyo.
Ngoko ke umoya apho iNkomfa Yehlabathi Yesixhenxe ye-GvSIG iya kuhamba. Ngokungathandabuzekiyo, iintetho zobugcisa ziya kuba yinto yokunethezeka, ziqwalasele ixesha elifanelekileyo ukuba isiseko ngoku sisebenza kumsebenzi walo wamazwe ngamazwe.
Ndifuna ukubona amaphepha phantsi kwengqwalasela ephambili, ngokuqinisekileyo siya kufunda okuninzi ekuqinisekiseni ukugcinwa komzekelo okwangoku ngoku sicinga ukuba uya kuhamba kodwa esingazicacileyo njengoko kuya kuba seminyaka eyi-20. Kule nto ayibhaliweyo, njengoko sibonile ukuguqulwa kweelayisensi ezizalwe phantsi kwe-GNU okanye i-flavour of distribution kwi kernel ye Linux.
Ukuqinisekiswa komntu ngokuqinisekileyo kuya kunqoba phambi kweendawo eziphambili.
Ekugqibeleni, kufuneka kuthathelwe ingqalelo ukuba ungaxubeki kwezopolitiko okanye inkolo kunye nezoqoqosho kunye nezobugcisa, ukuba zichaphazeleka ngokugqithisa okanye zibhekiswe kwizinto ezigqithiseleyo, kubalulekile ukuba uzilungele ukuhlaziywa. Kule nkalo kukho izikhundla ezahlukileyo, ukusuka ezulwini ukuya esihogweni.
Into ethile yembonakaliso yangaphambili ayizibonakalisi ukuba yithuba lokuhamba, kuphela ukutolika kwintambama yeCoca Tea, apho umhlobo wam uletha xa eya eSanta Cruz de la Sierra.
Ngexesha elithile ndiyakubonakala ngongqongqo, kodwa xa kuziwa ekulawuleni koqoqosho kufuneka unakekele i-clamp nganye. Ukuvala ndishiya ihlazo elihle ludumo olufikelelwa nguStallman kwingxaki engqubuzanayo esiyiyi kuvuma.
Post edlulileyo«Edlulileyo Iimephu zokuqonda ze-landscape: Juan Nuñez Girado
Post Next LiDAR kunye ne-DIELMO 3DOkulandelayo "
Iimpendulo ze-4 "gvSIG, ukunqoba izikhala ezintsha ... kuyimfuneko! Ingxabano? "
Kufuneka kukhunjulwe ukuba ukujonga kancinci kwimiba engacacanga kubangele iimeko ezididayo. Kwaye xa umdla wemibutho yezorhwebo enamandla uza kuchukunyiswa, kuya kufuneka uxelwe kwangaphambili.
Ukucamngca kakuhle, Ndicinga ukuba ngeli xesha liphuphuma kwiprose, kodwa ukucinga kwakulungile.
Ndicinga ukuba into ebaluleke kakhulu kwaye andizange ndiyiqonde kukuba i-Free Software ixhatshazwa yilo demoni, njengoko ndiyichaza, ukuba ezinye iindibano zibona.
Siyabonga ngokucaciswa nguArnold.
Nangona kwintengiso yamazwe aphesheya, ukukhangela kuyo njenge "coca infusion yamagqabi" akasebenzi kakhulu, kodwa njengeTea yeCoca okanye iTea yeCoca.
It tea, ukunyuswa, inyaniso kukuba kukuhle kakhulu.
Ndicinga ukuba itiye ye-coca, ingabi yiTay tea.